Fepetra motraka | NewsMada
Efa ho isan’andro ny lozam-pifamoivoizana mitranga eto amintsika, na eto an-dRenivohitra, indrindra nyany amin’ny lalam-pirenena. Matimaty foana ireny mpandeha ireny, tsy misy ny fepetra mivaingana, azo tsapain-tanana mifanaraka amin’ny loza miseho, na hisorohana ny loza mety hiseho.
Voalohany amin’ny resaka fandraisana fepetra isika rehefa misy ny zava-miseho. « Handraisana fepetra hentitra… hentitra ny fepetra raisina… », hoy ry zareo manampahefana. Tsy misy azo tsapain-tanana anefa ireo rehefa avy eo. Amin’ny voalohany ihany no be vonovorona… afaka telo andro eo, hadino ny fepetra hentitra, sns.
Raha tsiahivina izao, anisan’ny fepetra noraisin’ny mpitandro filaminana ny fanaraha-maso ny haavon’ny entana hoentin’ny taksiborosy. Angaha amin’izao misy miraharaha izany intsony ? Mahazo mandeha, na efa mitovy amin’ny haavon’ny fiara aza ny entana ao ambony. Anisan’ny mitera-doza izany, ary ireo iaraha-mahita ireo ny vokany.
Tsy misy fepetra henjana, na hentitra izany eto, fa fepetra motraka avokoa. Aiza ho aiza ny fampanarahan-dalàna amin’ny fitaratry ny fiara miloko mainty? Mandeha ho azy izany amin’izao, efa motraka ilay fepetra sy lalàna tamin’izany.
Mahatonga ny fepetra ho motraka izay fiainana mandeha ho azy eto amintsika izay. Vitan’ny kolikoly sy ny vola kely ny an’ireo mpitandro filaminana, ny mpamily, sns, mandeha ho azy ny zavatra rehetra avy eo. Indraindray, kabary ambony latabatra ihany ny resaka fepetra. Ny filazan’ireo manampahefana fa manara-maso izy ireo, saingy tsy mifanaraka amin’izay ny eny am-potony, na ny eny an-kianja.
Tsy ny hanakiana befahatany anefa fa rehefa tsy misy kosa ny fepetra raisin’ny tompon’andraikitra, ny fitsarana manolona izao loza amoizana ain’olona lava izao, hitohy hatrany io, hiverimberina. Tsy nahy ny loza, saingy rehefa miverimberina kosa, efa misy motraka tanteraka ao: na ny fepetra, na ny lalàna, na ny fiara… indrindra ny toe-tsaina!